ဆောင်းပါး > သားအ > သေဖို့မွေးဖွားလာ
အချိန်တန်လျှင် ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောနေရာ၌ လူ့ဇာတိခံယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင် လူသားများနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသည် သတင်းစကားကို ကြေငြာသည်။ ယေရှုသည် ဤမျှလောက်ထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူဖြစ်ပြီး အချို့က ကိုယ်တော်၏လူသားဖြစ်ခြင်းကိုပင် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင်၊ ဇာတိပကတိ၌ရှိသော ဘုရားသခင်သည် မိန်းမမှ ဖွားသော လူသားဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်မှတပါး၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အရပ်ရပ်တို့ကဲ့သို့ ဖြစ်တော်မူသည် (ယောဟန်၊ 1,14; ဂလာတိ 4,4; ဖိလိပ္ပိ 2,7; ဟီး 2,17) သူသည် အမှန်တကယ် လူသားဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်းကို ရိုးရာပြက္ခဒိန်အရ မေရီ၏ကိုယ်ဝန်မှ အမှန်တကယ်စတင်ခဲ့သည့်တိုင် ခရစ္စမတ်တွင် ကျင်းပလေ့ရှိသည်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် ရိုးရာပြက္ခဒိန်အရ၊5. မတ်လ၊ Annunciation ပွဲ (ယခင် Incarnation of the Feast or the Incarnation of God)။
သခင်ယေရှု၏ သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့် ဖွားမြင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက် အရေးကြီးသကဲ့သို့၊ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာသို့သယ်ဆောင်လာသော ယုံကြည်ခြင်းသတင်းစကား၏ ပထမဆုံးနေရာမဟုတ်ပေ။ ပေါလုသည် ကောရိန္သုမြို့၌ တရားဟောသောအခါ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော ခရစ်တော်၏ သာ၍ ရန်စဖွယ်သတင်းကို ဟောပြောခဲ့သည်။1. ကောရိန္သု 1,23).
ဂရိ - ရောမကမ္ဘာသည်မွေးဖွားလာသည့်နတ်ဘုရားများအကြောင်းပုံပြင်များစွာကိုသိသော်လည်းလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာကားတိုင်တိုင်မည်သူမျှမကြားဖူးပါ။ သေဒဏ်ပေးခံထားရသောရာဇ ၀ တ်သားကိုသာယုံကြည်လျှင်လူများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ရာဇ ၀ တ်မှုဖြင့်မည်သို့ရွေးနုတ်ဖိုးခံရသင့်သနည်း။
သို့သော် ယင်းအချက်မှာ- ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် လူဆိုးကဲ့သို့ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ရှက်ဖွယ်အသေခံခြင်းကို ခံစားခဲ့ရပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှသာလျှင် ဘုန်းအသရေ ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ပေတရုသည် Sanhedrin အား ဤသို့ရှင်းပြခဲ့သည်– “ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘေးများ၏ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုကို ထမြောက်စေတော်မူသည်… ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူတို့အား နောင်တနှင့် အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းငှာ မင်းသားနှင့် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ရန် လက်ျာလက်တော်အားဖြင့် ချီးမြှောက်တော်မူသည်” (တမန်တော်ဝတ္ထု၊ 5,30စာ-၃၁)။ သခင်ယေရှုသည် သေခြင်းမှထမြောက်ပြီး ချီးမြှောက်ခြင်းခံရသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ရွေးနှုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ ပေတရုသည် ရှက်စရာကောင်းသော ဇာတ်လမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းကို “... မင်းထင်းပေါ်ဆွဲချပြီး သတ်ခဲ့တဲ့” “သစ်သား” ဟူသော ဝေါဟာရသည် ဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကို တရားဟောရာ ၂ ပါ စကားလုံးများဆီသို့ သံသယဝင်စေခဲ့သည်။1,23 “... ကြိုးဆွဲချခံရသောသူသည် ဘုရားသခင် ကျိန်ဆဲခြင်းကို ခံရသည်” ဟု သတိပေးသည်။
Geez! ပေတရုသည် အဘယ်ကြောင့် ဤအရာကို ပြုစုရသနည်း။ သူသည် လူမှုနိုင်ငံရေး ချောက်ကမ်းပါးကို ရှောင်တိမ်းရန် မကြိုးစားဘဲ ဤရှုထောင့်ကို အသိစိတ်ဖြင့် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူ၏သတင်းစကားမှာ သခင်ယေရှုအသေခံခြင်းသာမက ဤဂုဏ်အသရေပျက်စေသောနည်းဖြင့်လည်းဖြစ်သည်။ ဤသတင်းစကား၏အစိတ်အပိုင်းသာမက၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ဗဟိုသတင်းစကားဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုသည် ကောရိန္သုမြို့တွင် တရားဟောသောအခါ၊ သူ၏ဟောပြောခြင်း၏ အဓိကအချက်ကို ခရစ်တော်၏အသေခံခြင်းဟု နားလည်ရုံသာမက ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းကိုလည်း လိုလားတော်မူသည်။1. ကောရိန္သု 1,23).
ဂလာတိတွင် သူသည် အထူးသဖြင့် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော်ပြသည့်အသုံးအနှုန်းကို ထင်ရှားစွာအသုံးပြုခဲ့သည်– “ယေရှုခရစ်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသောသူကဲ့သို့ သူတို့၏မျက်စိရှေ့မှောက်၌ ဆေးခြယ်ခြင်းခံရသည်” (ဂလာတိ၊ 3,1) ပေါလုသည် ဘုရားသခင်ကျိန်ခြင်း၏ သေချာသောနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ် ကျမ်းချက်ပေးထားသည့် ဤမျှလောက်ကြောက်စရာကောင်းသောသေခြင်းကို အလေးပေးဖော်ပြရန် အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။
ယေရှု ဘာကြောင့် ဒီလို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သေခြင်းမျိုးကို အရင်ခံစားခဲ့ရတာလဲ။ ပေါလုသည် ဤမေးခွန်းအတွက် အချိန်အတော်ကြာ စေ့စပ်နေပေလိမ့်မည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသော ခရစ်တော်ကို မြင်ပြီး ဘုရားသခင်သည် ဤပုဂ္ဂိုလ်၌ မေရှိယကို စေလွှတ်တော်မူကြောင်းကို သူသိခဲ့သည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာက ကျိန်စာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော ထိုဘိသိက်ခံသူကို အဘယ်ကြောင့်သေစေသင့်သနည်း။ (ဒါကြောင့် မွတ်စ်လင်မ်တွေတောင် ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်သတ်ခဲ့တာကို မယုံကြည်ကြဘူး။ သူတို့ရဲ့အမြင်မှာ သူဟာ ပရောဖက်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်က သူ့ကို ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ သူတို့က ယေရှုအစား တခြားတစ်ယောက်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်သတ်ခဲ့တာလို့ ငြင်းခုံကြတယ်။ )
ဧကန်စင်စစ်၊ ယေရှုသည် သူ့အတွက် အခြားနည်းလမ်းရှိရန် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌လည်း ဆုတောင်းသော်လည်း မရှိပါ။ ဟေရုဒ်မင်းနှင့် ပိလတ်မင်းတို့သည် ဘုရားသခင် “ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအရာ” ကိုသာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်– ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဤကျိန်ခြင်းကိုခံသောနည်းဖြင့် သူသည် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မည် (တမန်တော်များ၏ တမန်တော်များ)၊ 4,28; ဇူးရစ်ခ်ျကျမ်း)။
အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် - ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံတော်မူပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ကျိန်ခြင်းခံရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သေးငယ်သောပြစ်မှုများပင်၊ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ၎င်းတို့၏ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းမှာပင် ကားစင်တင်သတ်ခြင်းအထိ သက်ရောက်သည်။ အပြစ်ရှိသောကြောင့် လူသားအားလုံးသည် ကျိန်ဆဲခြင်းခံနေရသည်။ သို့သော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းက “ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက် ကျိန်ခြင်းခံရသောကြောင့် ငါတို့ကို ပညတ်တရား၏ကျိန်ခြင်းမှ ရွေးနုတ်တော်မူပြီ” (ဂလာတိ၊ 3,13) ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခဲ့သည်။ ငါတို့ ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ တကယ်ထိုက်တန်တဲ့ နာကျင်မှုနဲ့ အရှက်ကို သူယူခဲ့တယ်။
သို့သော်ဤအရာသည်သမ္မာကျမ်းစာကပြသထားသည့်တစ်ခုတည်းသောပုံသက်သေမဟုတ်ပါ။ ပေါလုသည်သူ၏စာတစ်စောင်တွင်ဤအထူးအမြင်ကိုသာဖော်ပြသည်။ သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသေခံတော်မူသည်ဟုမကြာခဏဆိုသလိုသူပြောခဲ့သည်။ ပထမတစ်ချက်တွင်ဤနေရာ၌ရွေးချယ်ထားသောစကားစုသည်ရိုးရှင်းသောဖလှယ်မှုတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သေထိုက်သည်။ ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အတွက်မိမိဆန္ဒအလျောက်အသေခံရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
သို့သော် ထိုမျှလောက် မရိုးရှင်းပါ။ တစ်ချက်ကတော့ ငါတို့လူသားတွေ သေနေကြတုန်းပဲ။ ခြားနားသောရှုထောင့်မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ သေဆုံးကြသည် (ရောမ 6,3စာ-၅)။ ဤဥပမာအရ၊ ယေရှု၏အသေခံခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် (ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာတွင် အသေခံခြင်း) နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ သေခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏အသေခံခြင်းကို ခံယူပါ၏)။ ၎င်းသည် အရေးကြီးသောအရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသာစေသည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ ကားစင်တင် အသေခံခြင်းမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်သည်။
ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် ရွေးချယ်ထားသော အခြားဥပမာတစ်ခုသည် ရွေးနုတ်ဖိုးကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်– “… လူသားသည် အမှုတော်ကိုဆောင်ခြင်းငှါ ကြွလာသည်မဟုတ်၊ များစွာသောလူများအတွက် ရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ် မိမိအသက်ကို ပေးလှူခြင်းငှာ ကြွလာတော်မူသည်” (မာကု၊ 10,45) ကျွန်ုပ်တို့သည် ရန်သူ၏သုံ့ပန်းအဖြစ်နှင့် ယေရှု၏အသေခံခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်မြောက်မှုကို အာမခံချက်ပေးထားသည်။
ငါတို့ရွေးနုတ်ပြီဟုပြောဆို၏။ ဤအသုံးအနှုန်းသည်ကျွန်စျေးကွက်နှင့်အချို့ကိုEgyptသရေလလူတို့အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ခွာသွားခြင်းအကြောင်းသတိရစေနိုင်သည်။ ကျွန်များကိုကျွန်အဖြစ်မှရွေးနုတ်။ ဘုရားသခင်သည်Israelသရေလလူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သားတော်ကိုစေလွှတ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်ဝယ်ခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်အပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
ကောလောသဲ၌ 2,15 အခြားပုံတစ်ပုံကို နှိုင်းယှဉ်ရန်အသုံးပြုသည်- «... သူသည် အာဏာနှင့် အာဏာများကို လုံးလုံးလျားလျား ဖြုတ်ချပြီး လူထုကို ပြသထားသည်။ [လက်ဝါးကပ်တိုင်၌] ထိုသူ၌ အောင်ပွဲခံတော်မူ၏။” (Elberfeld Bible) ဤနေရာတွင်ဆွဲထားသောပုံသည် အောင်ပွဲခံချီတက်ပွဲကို ကိုယ်စားပြုသည်- အောင်ပွဲခံစစ်ခေါင်းဆောင်က လက်နက်မဲ့၊ အရှက်ရနေသော အကျဉ်းသားများကို မြို့ထဲသို့ ဆွဲကြိုးချ ခေါ်ဆောင်လာသည်။ ကောလောသဲမြို့သားများထံပေးစာတွင် ဤကျမ်းပိုဒ်က ယေရှုခရစ်သည် သူ၏ကားစင်တင်ခြင်းခံရခြင်းအားဖြင့် ရန်သူအားလုံး၏တန်ခိုးကို ချိုးဖျက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အောင်ပွဲခံခဲ့ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကိုပုံသေများဖြင့်ဖော်ပြပေးပြီးမပြောင်းလဲနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းပုံသဏ္theာန်များဖြင့်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အစားယေရှု၏သေခြင်းတရားသည်အသေခံခြင်းအားဖြင့်အရေးကြီးသောအချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရန်သမ္မာကျမ်းစာသုံးသောပုံများအနက်မှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အပြစ်တရားကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုရွေးနုတ်ရန်သခင်ယေရှု၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်တရားကိုဥပဒေချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ပါကကားတိုင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝါကျကိုအစေခံခြင်းအဖြစ်မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းကိုချိုးဖောက်ခြင်းဟုကျွန်ုပ်တို့မြင်ပါက၎င်းအပြစ်အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုယေရှု၌တွေ့ရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစွန်းထင်းသောအခါယေရှု၏အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသန့်ရှင်းစေသည်။ သူ့ကိုယ်သူငါတို့လက်အောက်ခံနေတယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟာရွေးနုတ်ရှင်၊ အောင်နိုင်သူလွတ်မြောက်သူဖြစ်တယ်။ သူသည်ရန်ငြိုးကိုကြဲသည့်နေရာတိုင်း၌ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်ယေရှုရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုက်မဲခြင်းသို့မဟုတ်မိုက်မဲသောလက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဉာဏ်အလင်းနှင့်ဥာဏ်ပညာကိုပေးသောသခင်ယေရှုပင်ဖြစ်သည်။ ဒီပုံအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါ။
ဘုရားသခင်မရှိခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဤကမ္ဘာကြီးကို ကိုယ်တော်စီရင်မည့် “အမျက်တော်နေ့” ဖြစ်လိမ့်မည် (ရောမ၊ 1,18; 2,5) “သမ္မာတရားကို မနာခံသောသူ” တို့သည် အပြစ်ပေးခံရလိမ့်မည် (း၈)။ ဘုရားသခင်က လူတွေကို ချစ်ပြီး သူတို့ ပြောင်းလဲတာကို ပိုမြင်ချင်ပေမယ့် သူ့ကို ခေါင်းမာမာနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့အခါ သူတို့ကို အပြစ်ပေးတယ်။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကျေးဇူးတော် သမ္မာတရားမှ မိမိကိုယ်မိမိ ပိတ်ထားသောသူသည် အပြစ်ပေးခံရလိမ့်မည်။
ဒေါသမထွက်ခင် စိတ်ဖြေဖျောက်ရမဲ့သူနဲ့မတူဘဲ၊ သူက ငါတို့ကိုချစ်ပြီး ငါတို့ရဲ့အပြစ်တွေကို ခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်ဆိုတာ သေချာစေတယ်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖျက်ပစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ်အကျိုးဆက်များဖြင့် ယေရှုအား ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ “အပြစ်မရှိသောသူသည် ငါတို့အတွက် အပြစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။”2. ကောရိန္သု 5,21; ဇူးရစ်ခ်ျကျမ်း)။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကျိန်စာဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါတို့၏ဒုစရိုက်များကို သခင်ထံတော်သို့ အပ်နှံသည်နှင့်အမျှ၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်း၊ သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ငါတို့ထံ၌ သက်ရောက်ခဲ့သည် (အခန်းငယ်)။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တရားမျှတမှုကို ပေးထားသည်။
ဧဝံဂေလိတရားက ဘုရားသခင်ရဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ဖော်ပြတယ်- ငါတို့ကို အပြစ်စီရင်မယ့်အစား ခွင့်လွှတ်ဖို့ ဖြောင့်မတ်စွာ အုပ်စိုးစေတယ် (ရောမ၊ 1,17) ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို လျစ်လျူမရှုဘဲ၊ ယေရှုခရစ်၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခြင်းနှင့်အတူ သူတို့ကို ဂရုစိုက်သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း နှစ်ခုစလုံး၏ နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည် (ရောမ 3,25-26) ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (အပြင်၊5,8) ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏ ရပ်တည်ချက်မှာ သေခြင်းအားဖြင့် အပြစ်၏ ပြစ်ဒဏ်ကို လုံလောက်စွာ ထင်ဟပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သော်လည်း ခွင့်လွှတ်သူသည် နာကျင်ခြင်းကို တလိုတလား လက်ခံသောကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် အဖိုးအခ- နာကျင်မှုနှင့် ရှက်ခြင်းပုံစံဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစျေးနှုန်းကို ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖြင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်း (တစ်ကိုယ်ရေ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း) ကို ရရှိခဲ့သည်။ 1,20) ငါတို့ရန်သူဖြစ်သောအခါ၌ပင် ငါတို့အတွက်အသေခံတော်မူသည် (ရောမ 5,8).
ရေနစ်နေသူကို ကယ်တင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ တွန့်ဆုတ်မနေသင့်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် အပြစ်ရှိသောကမ္ဘာကို ကယ်တင်ရန် ဘုရားသခင်သည် တန်ခိုးတော်ရှိ၍ ယေရှုခရစ်ကို စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ “… ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေခြင်းပေတည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးအတွက်ပါ” (1. ဂျိုဟန် 2,2) ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် အသေခံတော်မူပြီး “ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင်” ဟူ၍ပင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားရှိသော ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများပင်ဖြစ်လင့်ကစား ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ပေးခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်စွာလုပ်ဆောင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ခရစ်တော်သည် ငါတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောင့်၊1. ကောရိန္သု 1,30) ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များသည် ကိုယ်တော်ထံတော်သို့ရောက်သွားပြီး ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိသော်လည်း ဘုရားသခင်ထံမှလာကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ အပ်နှင်းခြင်းခံရသည် (ဖိလိပ္ပိ၊ 3,9).
“သို့သော်လည်း၊ ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အား ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြွလာတော်မူသော ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ငါဟောပြော၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဤအရပ်၌ ခြားနားခြင်းမရှိ၊ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြ၍ ဘုရားသခင်၌ရှိသင့်သော ဘုန်းအသရေကို ကင်းမဲ့ကြပြီး၊ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရွေးနှုတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့် ကင်းလွတ်ကြ၏။ ယုံကြည်ခြင်းအတွက် အပြစ်ဖြေခြင်းအဖြစ် ဘုရားသခင်သည် ၎င်းအား မိမိ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြသရန်အတွက် အစောပိုင်းက ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် ယခုအချိန်တွင် မိမိ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြသရန်အတွက်၊ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရှိတော်မူသောသူ” (ရောမ 3,22-26) ။
ယေရှု၏အပြစ်ဖြေခြင်းသည် အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သူများသာလျှင် ၎င်းနှင့်အတူပါလာသောကောင်းချီးများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားကို လက်ခံသောသူသာလျှင် ကျေးဇူးတရားကို ခံစားနိုင်၏။ ဤနည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏သေဆုံးခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ် (ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်သော ကျွန်ုပ်တို့အစား ကိုယ်တော်၏သေခြင်း) အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ သူ၏ ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံရသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း သူ၏အောင်ပွဲနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏အရာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုယ်သူ သစ္စာရှိပြီး ကရုဏာနှင့် တရားမျှတသည်။ အပြစ်သည် အပြစ်သားများကဲ့သို့ အနည်းငယ်မျှ လျစ်လျူရှု၍မရ၊ 2,13).
လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အားဖြင့် ခရစ်တော်သည် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခဲ့သည်။2. ကောရိန္သု 5,19) မှန်ပါသည်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖြင့် စကြဝဠာတစ်ခုလုံးသည် ဘုရားသခင်နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်သည် (ကောလောသဲ 1,20) ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးသည် ယေရှုပြုခဲ့သောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရလိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ၊ အဲဒါက ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့အရာထက် ကျော်လွန်သွားပြီမဟုတ်လား။
အဓိကအချက်မှာ ယေရှုခရစ်တော်၏အသေခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီအကြောင်းကြောင့် သူ အသားဖြစ်သွားတာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုန်းအသရေသို့ပို့ဆောင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် ယေရှုအား ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်သေစေရန် နှစ်သက်တော်မူသည် (ဟေဗြဲ 2,10) ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးနှုတ်လိုသောကြောင့်၊ ငါတို့အတွက်အသေခံခြင်းအားဖြင့်သာ ငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်မယ်။
“ယခုအခါ သားသမီးတို့သည် အသွေးအသားရှိသောကြောင့် ညီတူမျှသောအတိုင်းအတာဖြင့် လက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သေခြင်းတရားကို အုပ်စိုးသော မာရ်နတ်ဟု ဆိုအပ်သော သေခြင်းတရားကို လွှမ်းမိုးသော သူထံမှ တန်ခိုးကိုယူ၍ သေခြင်းတရားကို ကြောက်ရွံ့သောအားဖြင့် ထိုသူအပေါင်းတို့ကို ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းငှါ၊ ဘဝက ကျွန်​ဖြစ်​ရမယ်​"2,14စာ-၁၅)။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီအတွက် အသေခံခြင်းခံခဲ့ရသည် (2,9) "... ခရစ်တော်သည် သင့်အား ဘုရားသခင်ထံ ပို့ဆောင်ခြင်းငှာ၊ ဖြောင့်မတ်သောသူအတွက် အပြစ်အတွက် တစ်ကြိမ်သာ ခံစားခဲ့ရပါသည်။" (1. ဓာတ်ဆီ 3,18).
လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာယေရှုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောင်းဆင်ခြင်ဖို့သမ္မာကျမ်းစာကအခွင့်အရေးများစွာပေးထားတယ်။ အရာရာတိုင်းသည်“ အချင်းချင်းဆက်နွယ်မှု” မည်သို့အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်နားမလည်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်းကိုလက်ခံသည်။ သူသေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထာဝရအသက်ကိုဘုရားသခင်နှင့်ဝမ်းမြောက်စွာဝေမျှနိုင်သည်။
“ထိုကာလ၌ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့၌ တပါးတည်းသောသားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ငါတို့သည် ထိုသားတော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်အကြောင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ ပါ၀င်သည်- ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်သည်မဟုတ်၊ ငါတို့ကိုချစ်၍ ငါတို့၏အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေခြင်းငှာ သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ချစ်သူတို့၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ဤမျှလောက်ချစ်တော်မူလျှင်၊1. ဂျိုဟန် 4,9-11) ။